उडिरहेको चराको दिसा शरीरमा पर्नु शुभ कि अशुभ ? | सुदुरपश्चिम खबर
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ 95
बिभिन्न कामका कारण हामी बाहिर निस्किने गर्दछौँ । तर बाहिर निस्किँदा संयोगवश हाम्रो शरीरमा पंक्षीहरुको दिसा पर्छ र हामी कतिपयले त त्यसको अनुभव पनि लिइसकेका हुन्छौँ । तर उडिरहेको चराको दिसा हाम्रो शरीरमा पर्याे भने के हुन्छ ? यो कुरा सायदैलाई मात्र थाहा होला ।
यस्तो घटनाले धनलाभ हुने, शुभ समाचार तथा आउने दिनमा हुने राम्रो काम तथा कुराको संकेत दिने गरेको ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख छ । साथै, धेरै अगाडी देखिको कुनै रोकिराखेको काम पनि पुरा हुनेछ भन्ने संकेत दिन्छ ।केहि देशहरूमा भने यसलाई अशुभ मानिन्छ । साथै, कुनै यात्रामा जाँदा वा राम्रो काम गर्न लागेको बेला चरा उडिरहेको देखेमा त्यसलाई भने सुभ संकेत मानिन्छ ।
यदि चरा तपाई गइरहेको स्थान तर्फ जान्छ वा दाहिने जान्छ भने यो कार्य सफलता हुने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै, तपाई गइरहेको बाटो भन्दा उल्टो वा देब्रे तर्फ गएको देख्नु भयो भने यात्रा गर्न नहुने तथा अशुभ मानिने कुरो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । gnewsnepal.com बाट सभार